Madaxweyne Erdogan oo dhulka ku jiiday CARABTA qaarkeed iyo reer galbeed - Caasimada Online
Home Dunida Madaxweyne Erdogan oo dhulka ku jiiday CARABTA qaarkeed iyo reer galbeed
Madaxweyne Erdogan oo dhulka ku jiiday CARABTA qaarkeed iyo reer galbeed
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Turkiga ee dib loo doortay Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan dowlado badan oo aad uga xun guusha uu ka gaaray doorashada xorta ah ee kadhacday dalkiisa.
Recep Tayyip Erdogan oo la hadlaayay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in Guddiga Doorashooyinka ay ka feejignaayen faragalin dibadda uga timid, waxa uuna cadeeyay inay badan yihiin cadowga kasoo horjeeda guushiisa.
Recep Tayyip Erdogan, waxa uu tusaale usoo qaatay guushiisa inay ka xumaayen dowladaha Mareykanka, Yurubta iyo tirro dowlado carbeed oo uu sheegay inay dugaashadan reer galbeedka.
‘’Reer galbeedku uma suuroobin inay la dagaalamaan guusheyda waayo waxa an ciribtirnay dhammaan qeybaha siyaasiyiinta ay ku xirnaayen reer galbeedka iyo dowladaha carabta ee aan rabin guusheyda’’
‘’Reer galbeedku waxa ay noo dhigeen dabino badan oo dhaxalgal u noqonkaray guul darro igu dhacd, waxaan mar waliba ku kalsoonaa alle iyo dadka shacabka ah ee aadka u jecel guusheyda’’
Recep Tayyip Erdogan, waxa uu tilmaamay in mudada uu heyn doono xilka inuusan ka raali noqon doonin dowlad shisheeye oo faragalin ku sameysa dowlad islaam ah, waxa uuna cadeeyay inay badan tahay dhagarta reer galbeedka.
Recep Tayyip Erdogan, waxa uu cod dheer ku sheegay in haddii lala tashan lahaa reer galbeedka iyo dowladaha carabta qaarkood ay burburi laheyd turkiga hase yeeshee aysan iminka dhici doonin.
Sidoo kale, Recep Tayyip Erdogan, oo ka hadlaayay guushiisa ayaa sheegay in meel fagaaro ah uu kula farxi doono shacabkiisa maadaama uu yiri ay guushiisa sabab u ahaayen.
Dhinaca kale, shacabka dalkiisa ayuu ugu baaqay in mar waliba ay ka fogaadan dugaashiga reer galbeedka oo uu sheegay inay tahay khatar iyo diin xumi.